mars 2017 - Page 2 sur 70 -
Ankasina : Jiolahy maty voatifitra teny ambony tafo
Lehilahy iray manodidina ny 25 taona no maty voatifitry ny polisin’ny UIR teny ambony tafo, teny Ankasina ny alarobia alina lasa teo. Notifirin’ny mpitandro filaminana ity farany, ka niantefa teo amin’ny tratrany ny bala miisa …Tohiny
Fikambanana Fitefa : Tanjona ny hampandrosoana ny any Avaratra
58 taona no nisian’ny Fikambanana teraky ny faritany Antsiranana (Fitefa), izay hivondronan’ny teraka avy any amin’ny distrika 9, any amin’ny faritra Diana sy Sava. Tao anatin’izay fotoana izay, betsaka ny zava-bitan’ny fikambanana entina hampandrosoana ny …Tohiny
Profesora Randriamanatana Harivelo : Tsy kolontsain’ny Malagasy ny manome rà an-tsitrapo
Isan’ireo firenena tena mila rà i Madagasikara raha eo amin’ny lafin’ny fitsaboana no asian-teny. Ny tsikaritra anefa hatreto dia mbola hita malaina ireo Malagasy amin’ny fanomezana izany, ary hita miharihary ihany koa fa mbola tsy …Tohiny
Ambalavelona : Nandray fepetra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena
Mirongatra indray ny aretina ambalavelona amin’izao fotoana izao. Efa ho iray volana izay no nisehoan’ity aretina hafahafa ity tamin’ny ankizivavy mpianatra any amin’ny kaominina Morondava. Maro ny torana na any an-tsekoly na eny an-dalana. Ary …Tohiny